Fijerena an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny T-shirt, mahazo aina! | Bezzia
Mihalava ny andro ary rehefa main-tany ny toerana any amin'ny toerana sasany dia miaraka amintsika ny hazavana hatramin'ny 10 alina. Manaparitaka bebe kokoa anay izy ireo, manome fotoana hankafizana amin'ny fomba samihafa ary tsy dia kamo izahay manao an'izany. Mivoaha amin'ny arabe Io no lasa fialam-boly tsara indrindra raha mahita varavarankely fivarotana, misotro toaka amin'ny teras na mankafy miaraka amin'ireo ankizy ao amin'ny valan-javaboary.
Amin'ireny fotoana ireny rehefa zava-dehibe ny fialamboly, fijery an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny T-shirt como ireo izay atolotray anio dia manampy amin'ny fahatongavantsika ho mahazo aina sy afaka. Afaka ny ho mpiara-miasa aminao indrindra ve ny pataloha jeans tianao, pataloha rongony mivelatra na zipo lava?
Amin'ny akanjo inona mahazo aina ianao? Misy ireo manana pataloha jeans sy T-shirt ho fanamiana rehefa mankafy ny fotoana fialamboly. Ny sasany mahatsiaro mahazo aina kokoa amin'ny pataloha rongony malalaka ary ireo izay mandritra ity vanim-potoana ity dia tsy mieritreritra ny hanao zavatra hafa ankoatry ny zipo na akanjo.
Na inona na inona safidintsika, vintana isika! Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fampiasana lobaka dia nalamina tamin'ny fomba demokratika. Tsy miresaka kiraro intsony ho an'ny fanatanjahan-tena na amin'ny fotoana tsy ara-potoana intsony isika; androany ny lobaka raisin'izy ireo amin'ny zavatra rehetra miaraka amin'ny fankatoavan'ny tontolon'ny lamaody.
Azonao atao ny manambatra ny pataloha jeans tianao indrindra Miaraka amin'ny T-shirt fotsy ary fenoy palitao na blazer ny fijery raha toa ka hivoaka amin'ny tolakandro ianao. Ny pataloha endrika safari Khaki dia tsara ihany koa ho an'ireo fotoana ireo; atambatra amin'ny tampony amin'ny feo ecru sy fasika, kilasika!
Raha ny anao no zipo sy akanjo miloka amin'ny voninkazo; amin'ny lohataona dia izy ireo no malaza indrindra amin'ny lokony. Miaraka amin'ireo lamina mahazatra miaraka amin'ny fototra manga na mainty, amin'ity taona ity ianao dia hahita endrika marobe amin'ny loko maitso sy mena manaitra.
Inona no fitambarana tianao indrindra? Tianao ve ireo fijery an-drenivohitra sy ahazoana aina miaraka amin'ny lobaka ireo?
Sary - Tia tena Pepa, Mikuta, Collage taloha, Ny Moptop, Dansvogue
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Fijerena an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny T-shirt
Ny fahazarana maharitra sy sambatra